‘Guardiola Waa Beenaale’ – Mourinho Oo Weeraray Tababare Pep Guardiola
Tababare Jose Mourinho ayaa ku eedeeyey macallinka Manchester City ee Pep Guardiola inuu yahay beenaale ka been sheegay dhaawac aan jirin oo uu ku sheegay David Silva.
Pep Guardiola ayaa Salaasadii sheegay in Silva ay suurtogal tahay inuu ka maqnaado kulanka Manchester derby ee Axadda maadaama uu dhaawacan yahay, waxaase arrintaas been cad ku tilmaamay Mourinho oo xusay in Pep uu dhaawac aan jirin sheegayo, isla markaana uu marin habaabinayo ciyaarta Axadda oo uu safkiisa ku bilaabi doono Silva.
“Kooxaha naga soo horjeedaa mar walba sidan ayay yeelaan. Waxay soo bandhigaan dhaawacyo, laakiin marka la gaadho wakhtiga ciyaarta qof walba wuu ciyaaraa.” Sidaas ayuu yidhi Mourinho.
Tababare Jose Mourinho oo Axadda garoonka Old Trafford ku martigelin doona Manchester City, ayaa waxa uu sheegay in aanu waligii ka been sheegin sida Guardiola oo kale caafimaadka kooxdiisa, isla markaana aanu ciyaartoy caafimaad qaba ku sheegin inuu dhaawacan yahay, taas oo ujeedadeedu tahay marin-habaabin.
Waxa uu Jose Mourinho xusay in tababare Wenger uu toddobaadkii hore sheegay in Lacazette uu ka dhaawacan yahay, laakiin uu ciyaaray kulankii ay Arsenal iyo Man United iska hor yimaaddeen, arrinta David Silva na ay sidaas oo kale noqon doonto.
Jose Mourinho waxa uu caddeeyey in difaaca reer Ivory Coast ee Eric Baily uu dhaawacan yahay oo aanu ciyaari doonin kulanka Manchester Derby, hase yeeshee Phil Jones uu caafimaadkiisu wanaagsan yahay, suurtogalna ay tahay inuu safto.
Marouane Fellaini iyo Zlatan Ibrahimovic ayuu caddeeyey inay suurtogal tahay inay ciyaaraan inkastoo ay weli cabanayaan, hase yeeshee, Nemanja Matic uu ciyaari doono.
Kooxaha Liverpool iyo Bayern Munich Oo wada furay xidhiidh wax kala Iibsi
Mourinho Oo Diiday Inuu Ka Hadlo Xaalada Benitez
Real Madrid oo Markii 10 aad Ku Guulaysatay Horyaalka Yurub ‘Champions League’
Ruushka Oo Si Cadho Leh Uga Jawaabay Maxkamad Xayiraad Saaray Ciyaartoygiisa
Sakho, Tiago Iyo Ciyaartooyada Kale Ee Ka Dhaqaajinaya Liverpool
Mashaqo La Kowsatay Klopp Iyo Liverpool Iyo Burnley Oo 19 % Kubbad Haysasho ah Ku Xasuuqday Reds
Pingback: ‘Aniga La Igama Ogolaadeen’: Mourinho Oo Weeraray Pep Guardiola